Madaxda Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo go’aan ka gaarayo casumaadii madaxweyne Farmaajo | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madaxda Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo go’aan ka gaarayo casumaadii madaxweyne...
Madaxda Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo go’aan ka gaarayo casumaadii madaxweyne Farmaajo
Wararka naga soo gaaraaya ayaa sheegaya in madaxweynayaasha maamuladda Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ay ogalaadeen inay yimaadaan Muqdisho, si loo sii amba qaado wadahadallada arrimaha doorashooyinka dalka.
Kulan u dhaxeeya seddaxda madaxweyne goboleed ee Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa lagu wadaa in uu maanta ka furmo magaalada Baydhaba ee gobolka Bay.
Maxamed Cabdi Waare iyo Cabdicasiis Xasan Lafta Gareen ayaa hadda ku sugan Baydhaba, iyadoo maanta uu magaaladaas ku wajahanyahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor.
Wararka ayaa sheegeysa in madaxweynayaashu shirka Baydhaba kadib ay soo gaari doonaan Muqdisho, gelinka dambe ee Maanta ama maalinta xigta ee berri ah.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa shalay galabta shaacisay in 10-ka bishan oo ku beegan berrito Khamiista ah uu Muqdisho ka furmi doono shir u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir.
Wararka ayaa intaas ku sii daray in sababta ay Villa Somalia u shaacisay xilliga uu furmayo shirkaas ay ka dambeysay aqbalaada casuumada shirka ee madaxda dowlad goboleedyada ee HirShabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug.
Kulanka Qoor Qoor, Laftagareen iyo Waare ee Baydhaba ayaa muhiimadiisu tahay waxa ay ka yeeli lahaayeen qodobadii shirka Dhuusamareeb-3, marka ay tagaan Muqdisho iyo sidii mowqifkooda u mideysnaan lahaa.
Ugu dambeyntii Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa mudo hal todobaad ah ku sugan Muqdisho, iyagoo shir ay la yeeshaan Madaxweyne Farmaajo shuruud uga dhigay inay ka soo qeyb galaan madaxweynayaasha maamulada HirShabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, taas oo uu aqbalay madaxweyne Farmaajo.